KYOKUSHIN MYANMAR | I.K.O MYANMAR BRANCH CHIEF
အိုင်ကေအိုမာဆုရှီးမား မြန်မာနိုင်ငံကျိုခ့်ရှင်းကရာတေး – ဥက္ကဋ္ဌ
– ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်သည် (၁၉၄၈)ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၇)ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။
– မွေးချင်းမောင်နှမ (၇)ဦးအနက် အကြီးဆုံးသားဖြစ်ပါသည်။
– အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝတွင် ကြက်တောင်ရိုက်၊ အပြေး၊ ဘောလုံးစသည့် အားကစားတို့တွင် လက်ရွေးစင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရပြီး ဆုတံဆိပ်များစွာရရှိခဲ့သော ထူးချွန်သော အားကစားသမားကောင်းတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
– ဆရာကြီးသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေဘွဲ့ (LLB) ကိုရရှိခဲ့ပါသည်။
– ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်သည် (၁၉၆၉)ခုနှစ်တွင် ဆရာကြီး ဒဂုံဦးစိုးတင့်ထံမှ ကျိုခ့်ရှင်းကရာတေးကိုစတင်သင်ယူခဲ့ပါသည်။
(ဆရာကြီးဒဂုံဦးစိုးတင့်ဆိုသည်မှာ (၁၉၅၇) ခုနှစ်တွင် ကရာတေးပညာရပ်ကို အစ ပျိုးခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကရာတေးFounder တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ဆရာကြီးဒဂုံဦး စိုးတင့်သည် သူ၏ကိုယ်ပိုင်ကရာတေးအသင်းဖြစ်သော Dagon Karate Club ကို (၁၉၆၂) ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျိုခ့်ရှင်းကရာတေးကို ပြန့်ပွားအောင် သင်ကြားခဲ့ပါသည်။
– ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်သည် (၁၉၇၀) ခုနှစ်တွင် ဆရာကြီးဦးဝင်းနိုင်၏ Hikari Karate Club တွင်ဆက်လက်ပညာသင်ယူခဲ့ပါသည်။ ထိုသင်တန်းတွင် Kyokushin Karate Styleနှင့်Shotokan Karate တို့အပြင်Ninjutsu, Kenjutsu, Nunchaku, Sai, Menjisai, Kama အစရှိသော ဂျပန်ရိုးရာကိုယ်ခံပညာရပ်များကို ဆည်းပူးသင်ကြားခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၂ – ၇၃
ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်သည် (၁၉၇၂-၁၉၇၃) ခုနှစ်တွင် Hikari အသင်း၏ Branch -7 ကို Branch Chief အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပါသည်။
– ဆရာကြီး ဦးမောင်မောင်မြင့်သည်Heiando ဟုအမည်ရသော ကိုယ်ပိုင် ကရာတေးအသင်းကို (၁၉၇၄) ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ၊လှိုင်မြို့နယ်တွင် တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
(ထိုခေတ်အခါက မြန်မာနိုင်ငံကရာတေးလောကတွင် ဆရာကြီးMas.Oyama ၏ Kyokushin Karate သင်ရိုးစာအုပ်များနှင့် ဆရာကြီး Gichin Funagoshi ၏ Karate Do Kyohenသင်ရိုးစာအုပ်များကို လေ့လာ၊ လေ့ကျင့်ပြီးသင်ကြားပို့ချခဲ့ကြပါသည်။ သို့သော် Kumite (Sparing) ကိုတော့Full Contact Fighting ကိုပဲ ကျင့်သုံးကြပါသည်။
– ဆရာကြီး ဦးမောင်မောင်မြင့်သည် (၁၉၇၅)ခုနှစ်တွင် သူ၏ပထမဆုံး သင်တန်း ခွဲကို မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့တွင်တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
– ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်သည် (၁၉၇၇) ခုနှစ်တွင် သူ၏ ဒုတိယမြောက် ကရင်ပြည်နယ် သင်တန်းခွဲကို ဘားအံမြို့သို့ ကိုယ်တိုင် ခက်ခက်ခဲခဲသွားရောက်၍ ထပ်မံတိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
– ဆရာကြီး ဦးမောင်မောင်မြင့်သည် (၁၉၇၈) ခုနှစ်တွင် ကရင်ပြည်နယ်လမ်းစဉ်လူငယ် ကျောင်းသားအယောက် (၁၀ဝ)ကို ဒေသပါတီကော်မတီ ဥက္ကဌ ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ခင်ဝင်း၏ လမ်းညွှန်မှုအရ ပြည်နယ်အားကစားရုံကြီးတွင် တာဝန်ယူ သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ရပါသည်။ ၄င်းသင်တန်း၏ သင်တန်းဆင်းပွဲအဖြစ် ကရာတေး ကိုယ်ခံပညာစွမ်းရည်ပြပွဲကြီးကိုကရင်ပြည်နယ် အားကစားရုံကြီးတွင် နှစ်ရက်တိုင်တိုင်ပြသခဲ့ရပါသည်။ ထိုပွဲတွင် ပရိတ်သတ်၏ တစ်ခဲနက် အားပေးမှုကြောင့် ပြည်နယ်အား/ကာရံပုံငွေများစွာ ရရှိခဲ့ပါသည်။
– ဆရာကြီး ဦးမောင်မောင်မြင့်သည် (၁၉၇၉) ခုနှစ်တွင် ကရာတေးပြိုင်ပွဲ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ရေးဆွဲသင်ကြား ပို့ချပေးခဲ့ပြီး (ရန်ကုန်တိုင်း၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်) ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းသုံးပွင့်ဆိုင် ကရာတေးစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲကို မွန်ပြည်နယ် ၊ မော်လမြိုင်မြို့တွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထိုပွဲတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမှ အောင်လွင် ၊မွန်ပြည်နယ်မှ ကိုကိုနိုင်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်မှ သိန်းလှိုင်တို့ဆုအသီသီးရရှိခဲ့ကြပါသည်။
– ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်သည် (၁၉၈၀) ခုနှစ်တွင် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း သုံးပွင့်ဆိုင်ကရာတေးစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲကို ကရင်ပြည်နယ်ဘားအံမြို့တွင်ထပ်မံကျင်းပရာ Breaking (Tameshiwari) နှင့်Kendo (Boken) စွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲတို့ကို ထည့်သွင်း ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထူးချွန်ဆုကို စောနီလေး (ကရင်)၊ မြင့်သူနှင့် တင်မင်းထွေး (မွန်ပြည်နယ်) တို့ရရှိခဲ့ကြပါသည်။
– ဆရာကြီး ဦးမောင်မောင်မြင့်သည် (၁၉၈၁) ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ မနော်ဟရီ လမ်းရှိ ဆရာကြီး ဦးစိုးတင့်၏ Dagon Karate Clubတွင်Black Belt 3rd Dan အဆင့်ကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။
– ဆရာကြီး ဦးမောင်မောင်မြင့်သည် (၁၉၈၂)ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၈)ရက်တွင်မြန်မာ့ရိုးရာ ကိုယ်ခံပညာနှင့် ယှဉ်တွဲ၍ ကရာတေးသင်တန်းဆင်းပွဲကို ကရင်ပြည်နယ် ဒေသကောလိပ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကျောင်းဆင်းပွဲသို့ ကရင်ပြည်နယ်ဒေသပါတီတော်မတီ ဥက္ကဌ ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ခင်ဝင်းနှင့် ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးချစ်ဖေတို့ ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ချီးမြှင့်ကြပါသည်။
– (၁၉၈၃) ခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား/သူများအား ကရာတေး ကိုယ်ခံပညာ စွမ်းရည်ပြပွဲကြီးကို တက္ကသိုလ် RC ခန်းမကြီးတွင် ပြသခဲ့ပါသည်။
– ဆရာကြီး ဦးမောင်မောင်မြင့်သည်၎င်းနှစ်တွင်သူ၏ Heiando Karate Dojo (Head Quarter)ကို တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့မှ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ကင်းဘဲလမ်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
– ၄င်းနှစ်တွင်ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်သည် Mr. Yoshinori Yakabe ထံမှ Chofukan Iaido ဓါးပညာကို သင်ကြားခဲ့ရပါသည်။
– ထိုနှစ်ထဲတွင် ပင်ရန်ကုန်မြို့ ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် (၈) မိုင်တွင် သင်တန်းခွဲကို ထပ်မံတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
– ဆရာကြီး ဦးမောင်မောင်မြင့်သည် (၁၉၈၄) ခုနှစ်တွင် Heiando ကရာတေး အသင်းကြီး၏ (၁၀)နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်ကရာတေး ကိုယ်ခံပညာ စွမ်းရည်ပြပွဲကြီးနှင့် (၈) ကြိမ်မြောက် ကရာတေးပြိုင်ပွဲကို အသင်းဌာနချုပ်၊ ကင်းဘဲလမ်းတွင် ခမ်းနားကြီး ကျယ်စွာကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထိုပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဂျပန်သံရုံးအတွင်းဝန် Mr. Yashinori Yakabe မှ Chofukan Iaido ဓါးစွမ်းရည်ကိုလည်းကောင်း၊ Mr. Kimiaki Osuka မှ Goju Ryu Karate ကိုလည်းကောင်း အထူးဧည့်သည်တော်များအဖြစ် ဝင်ရောက်ပြသခဲ့ကြပါသည်။
– Goju RyuမှMr.Kimiaki Osuka ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့သော (W.U.K.O) ပြိုင်ပွဲစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ရန်ုကုန်မြိ့ YMCA ခန်းမကြီးတွင် ကရာတေးစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲကြီးကို (၁၉၈၅) ခုနှစ် တွင်ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။ ထိုပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြသော အသင်းများမှာ –
၁။ Heiando Karate Club
၂။ Essec Karate Club
၃။ Fuji Yama Karate Club
၄။ Tiger Karate Club
၅။ Samurai Karate Clubနှင့်
၆။ Dagon Karate Clubတို့ဖြစ်ကြပါသည်။
– (၁၉၈၆) ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအား/ကာညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ဒင်မှ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ ကရာတေးအသင်း (၂၁)သင်းကို ခေါ်ယူ တွေ့ဆုံပြီး အသင်းအားလုံး ကို မြန်မာအမည်များ သို့ ပြောင်းလဲခေါ်တွင်စေပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ကရာတေးဒိုအဖွဲ့ချုပ်ကို ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ ယာယီအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဂျူဒိုအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ပူးတွဲ၍ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။
– ဆရာကြီး ဦးမောင်မောင်မြင့်သည် (၁၉၈၇) ခုနှစ်တွင် ကရင်ပြည်နယ် ၊ သင်တန်းခွဲ၏ (၁၀)နှစ်မြောက် စွမ်းရည်ပြပွဲနှင့် (၉)ကြိမ်မြောက် ကရာတေးပြိုင်ပွဲအား ကရင်ပြည်နယ် အားကစားရုံကြီးတွင် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းသုံးပွင့်ဆိုင် မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
-(၁၉၈၇) ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံဂျူဒိုအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌဗိုလ်မှူးကြီး မြင့်ဆွေ ကျင်းပသော ကရာတေးစွမ်းရည်ပြပွဲကြီးကို အောင်ဆန်းကွင်းမိုးလုံလေလုံခန်းမကြီးတွင် (၂)ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုပြပွဲတွင် ကရာတေးအသင်း (၁၈)သင်း၊ တိုက်ကွမ်ဒိုအသင်း (၂)သင်း၊ ကန်ဒို(၁)သင်း တို့ပါဝင်ပူးပေါင်း၍ စွမ်း ရည်ပြသခဲ့ကြပါသည်။
– ထိုနှစ်မှာပင် Heiando Karate Dojo (Head Quarter)ကို ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ကင်းဘဲလမ်းမှ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ယုဒဿန်ရိပ်သာသို့ သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
– ၁၉၈၉ခုနှစ်၊ဇွန်လ (၁၂) ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံကရာတေးဒိုအဖွဲ့ချုပ်ကိုသီးခြားရပ်တည်ခဲ့ပြီးဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရဲမှူးကြီးလှမြင့်ဆောင်ရွက်ပြီးအတွင်းရေးမှူးအဖြစ်ဦးစိုးဝင်းက ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ (M.K.F) အဖွဲ့ချုပ်နှင့်ပူးတွဲ၍နည်းစနစ်ကော်မတီ(၈)ဦးကို ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။
Shatokan Karate Style တွင်
၁။ ဆရာစိုးဝင်း (အလင်းရောင်ကရာတေးအသင်း)
၄။ ဆရာယုဇင်(ညီညွတ်ရေးကရာတေးအသင်း) တို့ဖြစ်ကြပြီး၊
Kyokushin Karate Style တွင်
၄။ ဆရာမောင်မောင်ဇော်(အမျိုးသားကရာတေးအသင်း) တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
– ဝါရင့်ဆရာကြီး(၂)ဦးဖြစ်သောဒဂုံဆရာကြီးဦးစိုးတင့်နှင့်Unitedဆရာကြီး ဦးသောင်းဒန် တို့အားမြန်မာနိုင်ငံ ကရာတေးဒိုအဖွဲ့ ချုပ်၏ နာယက တင်မြှောက်ခဲ့ကြပါသည်။
– မြန်မာနိုင်ငံကရာတေးဒိုအဖွဲ့ချုပ်၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ကျိုခ့်ရှင်းကရာတေးနည်းစနစ် ကော်မတီ(၄)ဦးဖြင့်Myanmar Kyokushin Karate Organization (M.K.K.O) ကို
၄။ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဆရာမောင်မောင်ဇော်(အမျိုးသားကရာတေးအသင်း) တို့ဖြင့်ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
-ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်သည် မြန်မာ့တပ်မတော်ရှိ ကွန်မန်ဒိုများကို မြန်မာနိုင်ငံအား/ကာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ဒင်၏ တာဝန်ပေးချက်အရကျိုခ့်ရှင်းကရာတေးနည်းပညာကိုသင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ရပါသည်။
-(၁၉၉၀) ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံကရာတေးဒိုအဖွဲ့ချုပ်ကို ဗိုလ်မှူးကြီးမြင့်လွင်က ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဗိုလ်မှူးကြီးသက်တင်က ဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်လွှဲပြောင်း အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။
-ထိုနှစ်တွင် ကျိုခ့်ရှင်းကရာတေးပြိုင်ပွဲကြီးကိုNational Indoor Stadium (1) သုဝဏ္ဏ ၊ရန်ကုန်မြို့တွင် သက်ကြီးတန်းနှင့်သက်ငယ်တန်း (၁၈) နှစ်အောက်Kumite Tournament ကိုစတင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုပွဲတွင် ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်၏ ပြိုင်ပွဲဝင်များဖြစ်သော ဗညားဂေါင် နှင့်ဝင်းသူတို့အသီးသီးဆုရရှိခဲ့ကြပါသည်။
ဆရာဦးမောင်မောင်မြင့်ကိုယ်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံ ကရာတေးဒိုအဖွဲ့ချုပ်၏ (I.K.O) Referee အဖြစ်စတင်တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
-ထို့နောက် မန္တလေးတိုင်းအား/ကာမှကြီးမှူး ကျင်းပသော မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ကရာတေး၏အသင်းပေါင်းစုံဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုဗထူးအားကစားရုံ(Ba Htoo Memorial Stadium)တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ(I.K.O) Refereeအဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်၏ကြိုးကြာနီအသင်းပြိုင်ပွဲဝင်ဝင်းသူမှဒုတိယဆုကိုရယူခဲ့ပါသည်။
– (၁၉၉၁) ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကရာတေးဒိုအဖွဲ့ချုပ်၏ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုရဲမှူးကြီး ခင်မောင်ထွန်းမှ လွှဲပြောင်းရယူခဲ့ပါသည်။ ၄င်းလက်ထက်တွင်2nd National Karate Do Championship ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်သည် ပထမဆုံး (I.K.O) Referee Certificate ကို ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင် ချီးမြှင့်ပေးအပ်ခြင်းကို လက်ခံ ရရှိခဲ့ပါသည်။
– ထိုနှစ်အတွင်းမှာပင် ဆရာကြီး ဦးမောင်မောင်မြင့်သည် ကရင်ပြည်နယ်သင်တန်းခွဲသို့ သွား ရောက်၍ နည်းပြမွမ်းမံသင်တန်းများ ပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။
– (၁၉၉၂) ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံကရာတေးဒိုအဖွဲ့ချုပ်မှကြီးမှူးကျင်းပသော2nd Junior & Novice (I.K.O) arate Do Championship တွင်ဆရာ ဦးမောင်မောင်မြင့်သည်Referee အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သဖြင့်(M.K.F) ဥက္ကဌရဲမှူးကြီး ခင်မောင်ထွန်းကိုယ်တိုင်ဂုဏ်ပြုလွှာကို ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။
– ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်သည် (၁၉၉၃) ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ Judson Hall (Main Dojo) တွင် (၁၉)နှစ်မြောက် ကရာတေးစွမ်းရည်ပြပွဲ ၊ပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ရာ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းသင်တန်းခွဲ (၆)ခုမှပါဝင်ဆင်နွဲခဲ့ကြပါသည်။
– (၁၉၉၄)ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်ကရာတေးဒိုကော်မတီမှကြီးမှူး၍ National Indoor Stadium (1)သုဝဏ္ဏ၊ရန်ကုန်မြို့တွင်Invitational Kyokushin Karate Tournamentကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ တပ်မတော်မှ ပြိုင်ပွဲဝင်များနှင့် ကရာတေးအသင်းပေါင်းစုံမှ ပြိုင်ပွဲဝင်များ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်၏ ကြိုးကြာနီ အသင်းကိုယ်စားပြု ပြိုင်ပွဲဝင်၊ဝင်းသူမှ (၅၅) ကီလိုတန်းKumiteတွင်ဒုတိယဆုကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်မှူးကြီးသက်တင်မှဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်အား (I.K.O) Referee ဂုဏ်ပြုလွှာ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။
-ထိုနှစ်တွင် (W.U.K.F) ကိုကမ္ဘာ့အိုလံပစ်ကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြုခဲ့သဖြင့် (M.K.F)ရှိShotokan Karateမှာအိုလံပစ်အားကစားဖြစ်လာပါသည်။Kyokushin Karate Founder Sosai Mas. Oyama ကွယ်လွန်ချိန်နှင့်တိုက်ဆိုင်ခဲ့ပါသည်။
– ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်သည် (၁၉၉၅) ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၄)ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသောMonsoon Karate Do Championship ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ(I.K.O) Referee အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကရာတေးဒိုအဖွဲ့ ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌရဲမှူးကြီးခင်မောင်ထွန်းမှ Referee Certificate ကိုထပ်မံချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။
-ထို့နောက်အိုလံပစ်အားကစားမဟုတ်သောကျိုခ့်ရှင်းကရာတေးပြိုင်ပွဲနှင့်နည်းစနစ် ကော်မတီ (၄)ဦးဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့သောMyanmar Kyokushin Karate Organization (M.K.K.O) အား မြန်မာနိုင်ငံကရာတေးဒိုအဖွဲ့ချုပ်မှကမ္ဘာ့အိုလံပစ် Charter အရ ဖယ်ရှားခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။
-(၁၉၉၆)ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံတော်မှ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အမျိုးသား အားကစား ပွဲတော်ကြီး အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကရာတေးဒိုအဖွဲ့ချုပ်မှဆရာကြီး ဦးမောင်မောင်မြင့်အား တာဝန်ပေးအပ်သဖြင့် ကရင်ပြည်နယ် ကိုယ်စားပြုအုပ်ချုပ်သူ /နည်းပြအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပါသည်။ ထိုပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆုနှင့် တတိယဆု အသီးသီးရရှိခဲ့ကြပါသည်။
– ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်သည် (၁၉၉၇)ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်မှပြုလုပ်သော အမျိုးသား အားကစားပွဲတော်ကြီးအတွက်(M.K.F) မှထပ်မံတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါသည်။ ကရင်ပြည်နယ်ကိုယ်စားပြုပြိုင်ပွဲဝင်အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့ဒုတိယဆုကိုရယူနိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ကရင်ပြည်နယ်အား/ကာညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမြင့်လွင်နှင့်အရာရှိများဂုဏ်ပြုချီးမြှင့် ခြင်းကိုရရှိခဲ့ပါသည်။
– ဂျပန်နိုင်ငံမှ ၊ရှင်းဂျုကုမGrandmaster Kohshiro M-Tanaka မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ၄င်း၏Fuji Ryu Taijutsu ကိုယ်ခံပညာကို ဆရာကြီး ဦးမောင်မောင်မြင့်သည်အောင်ဆန်းကွင်း ကရာတေးဒို လေ့ကျင့်ရေးခန်းမတွင်သင်ယူတတ်မြောက်ခဲ့ပါသည်။
– (၁၉၉၈) ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက်နေ့တွင် ဂျပန်နိုင်ငံဟို ကိုင်းဒိုးမှ ဆရာကြီးMr. Takagi (လေးကြိမ်မြောက်အာရှ ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပခဲ့သူ) နှင့်အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာပြီး၊ ဂျပန်- မြန်မာချစ်ကြည်ရေးKyokushin Karate Tournamentကိုပဒုမ္မာအားကစားရုံတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည် ။ ထိုပြိုင်ပွဲတွင် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပြိုင်ပွဲဝင်များမှာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ နှင့် အဋ္ဌမတို့ရရှိကြပြီး ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်၏ ပြိုင်ပွဲဝင်များဖြစ်ကြသောနိုင်နိုင်(စတုတ္ထ)၊ဝင်းသူ (ပဉ္စမ)၊ အောင်လွင် (ဆဋ္ဌမ) နှင့် စောအသီး (ထူးချွန်ဆု) တို့ရရှိခဲ့ကြပါသည်။ Shihan Takagi မှဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်နှင့်ဆုရပြိုင်ပွဲဝင် (၄) ဦးတို့ကို ဂျပန်နိုင်ငံ ဟိုကိုင်းဒိုးသို့ပညာသင်ဖြစ် ရွေးချယ်ခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။
– ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်သည် Kyokushin Karate Founder Mas. Oyama ၏ (I.K.O) Honbuအားတရားဥပဒေနှင့်အညီ အမွေဆက်ခံခွင့်ရရှိခဲ့သော သူ၏ဇနီး Mrs. Chiyako Oyamaထံသို့ (၁၉၉၈ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၁)ရက်) နေ့စွဲဖြင့် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လျှောက်ထား ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ Kancho Chiyako Oyama၏ညွှန်ကြားချက်အရ (I.K.O Board)အဖွဲ့ဝင် အာရှဥက္ကဋ္ဌShihan Shivaji Ganguly ထံမှ (၁၁၊၁၁၊၁၉၉၈) ခုနှစ် နေ့စွဲဖြင့် Asia Head Quarter Calcutta, Indiaသို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။
– ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်သည် (၂၀ဝ၂) ခုနှစ်တွင်Grand Master Koshiro M-Tanakaကိုယ်တိုင်ပေးအပ်ချီးမြင့်သောFuji Ryu Taijutsu 1st Dan Black Belt & Certificateကိုရရှိခဲ့ပါသည်။
– ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်သည် (၂၀ဝ၈)ခုနှစ်တွင်I.K.O President – Yoshikazu Matsushima ၏ Honbuဂျပန်သို့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လျှောက်ထားခဲ့ပါသည်။
– ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်သည် (၂၀ဝ၉) ခုနှစ်တွင်I.K.O Matsushima International Karate Organization Kyokushinkaikan (Honbu) Japan မှ I.K.O Myanmar Branch Chief အဖြစ်တရားဝင်ခန့်အပ်ခြင်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။
-ထိုနှစ်မေလတွင်ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်သည်ရန်ကုန်မြို့ရှိMain Dojo (Judson Hall) တွင်Junior Kyokushin Karate Tournamentကိုကျင်းပခဲ့ပါသည်။
– ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်သည် (၂၀၁၀) ခုနှစ်တွင်Kancho Matsushima ၏တရားဝင်ခွင့်ပြု ချက်အရMatsushima Cup Full Contact Kyokushin Karate Tournamentအမည်ဖြင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး နှစ်တန်းခွဲ၍ ပြိုင်ပွဲကြီးကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။
– ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်သည် (၂၀၁၁) ခုနှစ်၊ မေလ (၂၁)ရက်နေ့တွင်The 2nd Matsushima Cup ကျိုခ့်ရှင်းကရာတေး ပြိုင်ပွဲကို သက်ကြီးတန်းနှင့် သက်ငယ်တန်း နှစ်တန်းခွဲ၍ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
– ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်သည် (၃၉)နှစ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲ၊ ကရာတေးစွမ်းရည်ပြပွဲ နှင့်The 3rd Matsushima cup ကျိုခ့်ရှင်းကရာတေးပြိုင်ပွဲကို (၂၀၁၂ )ခုနှစ် မေလ၊(၂၆)ရက်နေ့ တွင်ကျင်းပခဲ့ပြီးကိုယ်တိုင်Tameshiwari (Breaking) စွမ်းရည်ကို ပြသခဲ့ပါသည်။
– ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်သည် (၂၀၁၃)ခုနှစ်တွင်I.K.O President Yoshikazu Matsushima နှင့်ဇနီးအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ဖိတ်ခေါ်၍The 4th Matsushima Cupပြိုင်ပွဲကြီးကိုခမ်းနားထည်ဝါစွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။Kancho Matsushima မှKyokushin Karate မွမ်းမံ သင်တန်းများကို ပို့ချပေးခဲ့ပြီး၊ နည်းပြဆရာများ၏ ခါးစည်းနက်Danအဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်း စာမေးပွဲများကို ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးချီးမြှင့် ပေးခဲ့ပါသည်။
– ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်မြင့်သည် (၂၀၁၄)ခုနှစ်၊ မေလ (၂၆)ရက်နေ့တွင်The 5th Matsushima Cup ကိုအစဉ်အလာမပျက်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။